🥇 ▷ Iibsiga iibsiga: Samsung Galaxy A80 oo ay la socdaan Xidhmo Battery Wireless iyo Cover Cover ✅
Iibsiga iibsiga: Samsung Galaxy A80 oo ay la socdaan Xidhmo Battery Wireless iyo Cover Cover
Soo iibso illaa Oktoobar 6 Galaxy A80, Samsung-na waxay ku siineysaa Xidhmo Battery iyo Cover Joogto ah oo bilaash ah. Hoos waxaad ka aqrin kartaa sida xayeysiintaani u shaqeyso iyo halka aad ku iibsaneyso aaladda.
Galaxy A80 waa taleefanka casriga ah ee Samsung oo leh kamarad sedex jibaaran. Thanks to farsamooyinka gaarka ah, kamaradda 48-megapixel waxay kuu oggolaaneysaa inaad sawirro caadi ah iyo fiidiyowyo iska qaadatid, laakiin sidoo kale super hi-res selfies. Intaa waxaa sii dheer, tani uma baahna wax carbis ah oo ku jira shaashadda si ay cidhifyada shaashadda uga dhigaan kuwo khafiif ah. Dabcan, A80 sidoo kale waxay leedahay qalab deg deg ah oo sidoo kale ku jira ciyaaraha dhamaadka-dhamaadka Fortnite weyn oo ku saabsan orodka. Qalabka sawirka faraha ayaa ku jira shaashadda, waana mahadsan tahay 25 Watt oo dhakhsi u dallac ah waxaad si buuxda ugu dallaci kartaa A80 saacad iyo badh gudahood.
Samsung Galaxy A80 oo leh batari bilaash ah iyo dabool
Thanks to naqshadeeda gaarka ah, Galaxy A80 ma ahan taleefoon rakhiis ah – waxaan horay uga barbar dhignay Galaxy S10, xitaa. Laakiin toddobaadyada soo socda waxaad ka heli kartaa laba qalab oo wax ku ool ah oo bilaash ah. Xidhmada Aaladda Wireless Battery-ka waxaad ku dallaci kartaa A80 aan lahayn fiilo la’aan. Awoodda 10,000 mAh, tani waxay kufiican tahay ku dhawaad ​​saddex jeer qaadasho. Intaa waxaa dheer, waxaad heli kartaa Cover Samsung Cover, kaas oo aad ku meeleeyn kartid aaladda meel kasta adoo u mahadcelinaya heerka la dhisay. Daboolida iyo batteriga waxay leeyihiin wadarta qiimaha tafaariiqda oo ah € 94.98.
Waad heli kartaa haddii aad adigu iska leedahay iibsashadaada Galaxy A80 laga bilaabo Sebtember 2 ilaa Oktoobar 6. Waa inaad sidoo kale iska diiwaangeliso ka qeyb qaadashadaada dallacsiinta bogga Hordhaca ee HALKAN. Halkaasna waa inaad sidoo kale gelisaa koobiga qaan-sheegashada / rasiidka iyo sawir sanduuqa koodhka sanduuqa oo leh lambarka IMEI iyo lambarka EAN. Tan waad sameyn kartaa ilaa iyo ugu dambeyn Oktoobar 21 ugu dambeyn. Miyaad ku xayiran tahay? Waxaad taageero dheeraad ah ka heli kartaa bogga xayeysiinta Samsung.
ISTICMAALKA LACAGTA: waxaad heleysaa oo keliya batteriga iyo daboolista haddii aad iibsato aaladda DUTCH. Xaqiiqdii waad ka iibsan kartaa nuqul rasmi ah oo Dutch ah dukaamada ku xayeysiiya xayeysiintaan:
Ma qorshaynaysaa inaad iibsato A80-kaaga meel kale? Ka dib hubi in xayeysiinta la xayeysiinayo. Sow taasi maahan? Markaa adigu marka hore isweydii.